Agba Coral na-acha uhie uhie na-enye ya arịrịọ maka olu na ọla ndị ọzọ - vidiyo
Coral ọtụtụ agba na-enye ya arịrịọ maka olu na ọla ndị ọzọ. A na-eji coral uhie uhie dị ka nkume dị oké ọnụ ahịa. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ coral ọkụ, ọ bụghị otu ihe na coral ọkụ. Coral na-acha ọbara ọbara dị ụkọ n'ihi ịba ụba. Na mkpokọta, enweghi ike inye coral dị ka onyinye ebe ọ bụ na ha na-agbadata n'aka ndị nrụgide dị ka mgbanwe ihu igwe, mmetọ, na azụ a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Echere mgbe niile dị ka mineral dị oké ọnụ ahịa, ndị China enweela njikọ chiri anya na-acha ọbara ọbara na ogologo oge n'ihi agba ya na o yiri ya na mgbada, yabụ site na mkpakọrịta, omume, ogologo ndụ, na nnukwu ọkwa. O ruru ogo ya nke ewu ewu n’oge ndị eze Manchu ma ọ bụ Qing (1644-1911) mgbe ọ fọrọ nke nta ka edobe naanị ya maka ihe eze ukwu jiri ma ọ bụ n'ụdị klaasị maka ọla ụlọ ma ọ bụ dị ka osisi ndị nwere obere osisi ịchọ mma. A maara ya dị ka shanhu na Chinese. Ihe mkpuchi mbu nke oge mbu o jiri Oke Osimiri Mediterenian gbadata na Qing China site na ụlọ ọrụ Bekee East India. E nwere iwu siri ike gbasara iji ya bụ usoro nke Emperor Qianlong guzobere na 1759.
Gịnị bụ Coral?
Coral bụ ihe dị n'ime mmiri dị n'etiti klas Anthozoa nke phylum Cnidaria. Ha bikwa na ngalaba obibi nke polyps yiri ibe ha. Dị coral gụnyere ndị na-ewu mgbidi dị mkpa nke na-ebi oke osimiri na ebe okpomọkụ ma na-eme ka carbon kalịkọs na-eme ka ọkpụkpụ siri ike.
Otu coral bụ mpaghara polyps na-egosipụta otu ihe mepụtara. Polyp nke ọ bụla bụ anụmanụ dị sac dị iche iche ọ bụ naanị millimita ole na ole na sentimita ole na ole n'ogologo. Ọtụtụ ụlọikwuu na-emechi ọnụ na-emepe emepe. Otu exoskeleton dịpụrụ adịpụ na ntọala ahụ. Kemgbe ọtụtụ ọgbọ, otu a na-esi otua mepụta akwara dị mma nke ụdị ahụ. Ndi isi n’otu n’eto toro site na nmeputa nwoke nke polyps. Ọ na-amụkwa mmekọahụ site na imebi: polyps nke otu ụdị na-ahapụ gametụ n’otu oge n’otu oge ruo ọtụtụ abalị gburugburu ọnwa zuru oke.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ coral na-enwe ike ijide obere azụ na plankton site na iji mkpụrụ ndụ na-egbochi ihe mgbochi na ihe mgbochi ha, ọtụtụ okwute na-enweta ike na nri ha site na dinoflagellates photosynthetic unicellular dinoflagellates na mkpụrụ ndụ Symbiodinium nke bi n'ime anụ ahụ ha. Ndị a bụ ndị a na-akpọkarị zooxanthellae. Dị otú ahụ ọ chọrọ ìhè anyanwụ ma tolite na mmiri doro anya, na-emighị emi, ọ na-enwe omimi na-erughị mita 60. Coral bụ ihe kacha enyere ndị mmadụ aka na mmiri ozuzo na-etolite na mmiri na-ekpo oke ọkụ ma dị n'okpuru ala, dịka Great Barrier Reef n'akụkụ ụsọ mmiri nke Queensland, Australia.
Na ọgwụ, enwere ike iji ọgwụ na-agwọ ọrịa cancer, ọrịa AIDS, na maka ọgwụgwọ ndị ọzọ. A na-ejikwa ọkpụkpụ Coral, dịka Isididae na-eji agba ọkpụkpụ. A na-eji Coral Calx, nke a maara dị ka Praval Bhasma na Sanskrit, n'ọtụtụ ọdịnala nke ọgwụ Indian dị ka mgbakwunye na ọgwụgwọ nke ọrịa metabolic dị iche iche metụtara ụkọ calcium. Na oge gboo ịchọrọ inyocha ya, nke ihe mejupụtara ya bụ sọlfọ carbonate na-adịghị ike, ka Galen na Dioscorides kwadoro ka ọ bụrụ ọnya afọ.
Coral si Tunisia
Zụrụ coral eke na ụlọ ahịa anyị
Anyị na-eme ọla edo edo edo na coral dị ka mgbanaka, ọla ntị Studio, mgbaaka, olu ma ọ bụ pendant.
Tags coral, Ezi nchekwa